युगसम्बाद साप्ताहिक - सुखको खोजीमा मात्र हिंड्यो भने त्यसले कर्मलाई आफंै पर धकेलिदिन्छ
Thursday, 04.09.2020, 12:31pm (GMT+5.5) Home Contact
सुखको खोजीमा मात्र हिंड्यो भने त्यसले कर्मलाई आफंै पर धकेलिदिन्छ
Wednesday, 07.26.2017, 03:00pm (GMT+5.5)
वरिष्ठ कलाकर्मी नीर शाह
नेपालमा टेलिभिजन स्थापना गरेर इतिहास बनाउनुभएका वरिष्ठ कलाकर्मी नीर शाह रंगमञ्च, चलचित्रका कुशल अभिनेताका साथै साहित्यसर्जक पनि हुनुहुन्छ । वजनदार आवाज अनि खारिएको अभिनयले जोकसैलाई प्रभावित पार्ने क्षमता राख्ने शाहको जीवनदर्शन आफ्नै किसिमको छ । अत्यन्त बौद्धिक तर्क गर्न रुचाउने शाहको बुझाईमा जीवन र अभिनयका विषयमा गरिएको यो कुराकानी यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत छ–
० आजसम्मको अनुभवमा जीवन के रहेछ ?
त्यति सजिलै जवाफ दिन सकिने बिषय होइन यो । यसको अर्थ ठ्याक्कै यहि हो भनेर कसैले पनि पत्ता लगाउन सक्दैनन् जस्तो लाग्छ मलाई । कसैसँग जीवनको ठोस परिभाषा छ भने मलाई पनि भन्दिनुहोला । म पनि जीवनको एकमुस्ठ जवाफको खोजीमा छु ।
तर पनि मेरो बुझाइमा मर्दासम्म पनि लिइरहने फरक–फरक अनुभवहरुको संगालो मात्र हो जीवन । बिभिन्न आवेगहरुको, राप, सन्ताप र खुसीका झिल्काहरुको भण्डार हो जीवन ।
० जीवनले तपाँइलाई के सिकायो ?
जीवनले मलाई कर्मशील हुन सिकायो । जो कर्मशील छ उसका लागि उसले चाहेको चिज आफैं वरिपरी आउँछ । त्यसैले मलाई जीवनले कर्मशील हुनुपर्छ भन्ने सिकायो । सुखको खोजीमा मात्र हिंड्नुभयो भने त्यसले कर्मलाई आफंै पर धकेलिदिन्छ । तर, कर्ममा रमाउँदै अघि बढे खुसीका साथमा सुख आउँछ । कर्म छोडियो भने जीवनभरी खुसी खोजेको खोजै वित्छ, न खुसी भेटिन्छ न सुख । आफ्नै वरिपरी सम्पूर्ण सुख उपस्थित छन् । त्यसको पहिचान गर्न र सन्तुष्टि प्राप्त गर्न नसक्नु जीवनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो भन्ने मेरो जीवनले सिकायो ।
० जीवनको प्राप्ति चाहिँ के रहेछ ?
जीवनको प्राप्ति भनेको सन्तुष्टि हो, बस् यो भन्दा बढी प्राप्ति हुँदैन । सबैभन्दा दूर्लभ प्राप्ति पनि त्यही नै हो । अरु केही पनि छैन दुनियाँमा । सन्तुष्ट होउ अनि जीवन जीउ ।
० अभिनयले जीवन अभिब्यक्त गर्न सक्छ ?
अभिनयले जीवन हैन जीवनका केही पाटाहरु अभिब्यातm गर्दछ । सम्पूर्ण जीवन अभिब्यक्त गर्न त जीवन बाहेक अर्को बिकल्प नै छैन । जीवनको बिकल्पमा अर्को केही बस्तु निर्माण भएको छैन कि त्यसले सम्पूर्णतामा जीवन अभिब्यक्त गरोस् ।
हरेक विषयले जीवनका केही कुरा अभिब्यक्त गर्न सक्छहोला । त्यसमध्ये अभिनय पनि एक हो । तर त्यो अभिनयलाई कुन गहिराईमा आफूले ग्रहण गर्नुभएको छ त्यसको मात्रात्मकताको आधारमा त्यति नै जीवन देख्न सकिन्छ । तर जीवनका सिंगै पाटाहरु त बाँकी नै हुन्छन् ।
० जीवन जिउने कला र अभिनय कलामा के फरक रहेछ ?
अभिनय गर्न सकिने कला हो । जीवन गर्न सकिने कला होइन । कोही जीवन जीउने कला गरिरहेको छ भने उसले प्राकृतिक जीवन जिएको छैन भन्ने बुझ्नु पर्छ । त्यो जीवन जीउने अभ्यास हो । त्यो जीवन जस्तै देखिए पनि साँचोमा जीवन होइन । नदी हेर्नुस न, नदीले बेग र बाटो आफैं सिर्जना गर्छ नि, त्यस्तै जीवनले पनि आफ्नो बेग र बाटो बनाउदै अगाडि बढेको हुन्छ । यदि त्यसलाई कुनै पनि कलामा ढाल्ने प्रयत्न गरियो भने त्यसको प्राकृतिकता मरेर जान्छ ।
नदी आफ्नै बेगमा हिडेमा मात्र नदी हो । त्यसलाई त्यतिनै बराबरको पानी लिएर अर्कोतिर फर्काउँ त, त्यो नदी होइन त्यसको नामै फरक हुन्छ । त्यो त नहर हो । त्यसैले जीवनलाई प्राकृतिक रुपमा बग्न दिनुपर्छ अनि मात्र त्यो जीवन हुन्छ । नभए त त्यो जीवन नै होइन नि ।
आजकालका मानिसहरु जीवन त्यसरी बाँच्छन् । त्यसैले जीवन दिन प्रतिदिन झनै कृत्रिम बन्दै गएको देख्छु म । अध्यात्मिक भएर हेर्दा अहिलेका गर्नै पर्ने भनेर अगाडि आएका कुरा सबै कृत्रिम हुन् जसले साँचो जीवनको रौनकता गुमाउँदै लगेको छ ।
जीवन स्वयंमा एउटा महत्वपूर्ण कला लिएर हुर्किरहेको हुन्छ । त्यसलाई संसारिक कुनै कलाले छुदैन, कतै बाट पनि । जीवनले हरेकलाई एक एकवटा बरदान दिएको हुन्छ । त्यो हो मान्छे भित्र हुर्कने मान्छे । त्यस भित्र कलाकार, पत्रकार, समाजसेवी श्रृजनाका अनेकन श्रोतहरु लुकेको हुन्छ । त्यसलाई हरेकले कत्तिको जगाउन सक्यो र त्यसमा खुलेर रमाउन सक्यो त्यो हो जीवन ।
० कुनै पात्रको चरित्रमा अभिनय गर्दा तपाईंभित्रको चरित्र चाहीं कता हराएको हुन्छ ?
आफ्नो चरित्रलाई अभिनय गरेको चरित्रसँग जति टाढा राख्न सक्यो अभिनय कलामा त्यति नै बढी निपुणता पाउन सकिन्छ । अभिनय भनेको अभिनय हो । त्यो अभिनयको समयमा मात्र साथ हुन्छ । अनि अभिनय सकिएपछि उ उसको रियल जीवनमा आउँछ ।
आफू र अभिनय गर्न लागेको चरित्र दुईटा भिन्नाभिन्नै ब्याक्तित्व हुन् । जो अभिनेताहरु विश्वमा चिनिन्छन्, ती सबैलाई हेरेर के बुझ्नुपर्छ भने जसले आफ्नो चरित्र टाढा राखेर अभिनयमा चरित्रको चित्रण गरे उनीहरु नै सफल भए ।
मार्लिन ब्रान्डोले गड फादरको चरित्र निर्वाह गर्दा उनको चरित्रलाई भुलेर उनी गड फदरको चरित्रमा उत्रिए र उनी विश्व चर्चित बने । त्यसैले जति अभिनयमा आफूलाई भुल्न सकिन्छ त्यो अभिनय नै सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ।
० आफूले अभिनय गरेको पात्रताले तपाँईलाई रुवाएको छ ?
छ, किन नरुवाउनु ? धेरै पटक रोएको छु । धेरै पटक हाँसेको छु । क्रुर भूमिका निर्वाह गर्दा मलाई मसँगै कति रीस उठेको छ । छोरी भन्ने सिनेममा गौरी माल्लसँग अभिनय गर्दा छोरीलाई अन्माएर पठाएको अभिनय गर्दा साँच्चै रोएको थिएँ म । त्यस्तै अनेकांै उदाहरण छन् मसँग । रोएका र अभिनयकै क्रममा हाँसो रोक्नै नसकेर हाँसेको छु ।
० कस्तो बेला साँचो नीर शाह आफूनजिक हुन्छ ?
म बढी नै एक्लै बस्न रुचाउँछु, जहाँ म मात्र रहुँ । मभित्र सुसुप्त रहेको नीर शाह त्यो बेला मात्र म हेर्न सक्छु । त्यसरी एक्लो हुँदा आफूलाई म नजिक पाउँछु र साँचो मसँग कुरा गर्न पाउँछु । कहिलेकाहीं म आधा दिन नै आँखा चिम्म गरेर मसँग बिताउँछु ।
साँच्चै मैले चाहने कुरा पनि यहि हो । त्यस्तो समय म मेरो मसँग कुरा गर्छु । बादबिबाद गर्छु । यस्तो सबैको जीवनमा हुन जरुरी छ । किनकि यसले म को हुँ भन्ने चिनाउँछ र आफूलाई ‘म’को नजिक पु¥याउँछ । जीवन निर्बाह गर्दा गरिने एउटा पाटो हो त्यो आत्मबिश्लेशण । त्यो सबैले गर्नुपर्छ ।
० कस्तो पात्रको अभिनय गर्दा तपाँइको छाती गर्वले फुलेको छ ?
केही खुसी हुनु स्वाभाविक हो । तर मैले आकासै छुने त्यस्तो खुसीका क्षणका रुपमा केहीलाई पनि लिइनँ । केही दुःखमै रोइहाल्ने र केही खुसीमै छताछुल्लै हुने म कहिल्यै भइनँ । दुबै कुरालाई बीचैमा राखेर हिडे म सधैं । त्यसैले ती दुबै कुरा मेरो सिकाईका पाटा थिए । एसएलसी पास हुँदा मेरो सिम्बोल नम्बर गोरखापत्रमा देखेँ खुसी लाग्यो । अस्कर अवार्ड महोत्सबमा जब म प्रबेश गरँे खुसी लाग्यो । नेपालमा टेलिभिजन सुरु भयो, प्रत्यक्ष देखेँ मलाई खुसी लाग्यो । दरबार हत्याकाण्डमा मेरा परिवारका सदस्य गुमाएँ मलाई दुःख लाग्यो । त्यस्तै बुबालाई अस्पताल राखिएको थियो अन्तिम अबस्थामा हुनुहुँदोरहेछ मैले यस्तो गर्न सकिनँ भनेर मलाई सुनाउनु भाथ्यो त्यो बेला दुःख लाग्यो । यस्ता दुःख सुख हुन्छन् तर मैले आफूलाई कहिल्यै तलमाथि गराइनँ । न खुसीमा न दुःखमा ।
० अभिनय गर्दा संवाद र भाव मध्ये कुन बढी शक्तिशाली हुने रहेछ ?
अभिनयमा प्रत्येक साना ठूला कुराहरुले त्यति नै महत्व राख्छ । तर शब्दले बोल्नै नसक्ने कुरा पनि भावले बोल्न सक्छ भने भावका सबै कुरा शब्दमा उतार्न सकिँदैन । संबादमा जस्ताको तस्तै ल्याउन सकिंदैन संवादलाई पनि डो¥याउने सामथ्र्य भावले राख्ने हुनाले भाव शब्दभन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छ ।
० अभिनय हो चाहीँ के त ?
अभिनय भनेको एक अर्थमा भन्दा एक्सप्रेसन अफ योअर्स इम्प्रेसन । कुनै पनि मन त्यो बस्तुबाट प्रभावित नभई त्यसबारे केही भन्नै सकिंदैन । कुनै पनि कुरालाई अनुभुत नगरी अभिब्यक्त गर्न सकिन्न । आफूमा अन्य चरित्र हाबी हुन दिई अभिब्यक्त हुनु अभिनय हो ।
० तपाइँ अभिनयमा प्रवेश गर्दाको समयको धरातलमा उभिएर हेर्दा अहिलेको स्थान कहाँ छ ?
त्यो बेला भन्दा अहिले केही प्रबिधिक ज्ञान बढाएको छु । त्यो बेलाको यो अभिनय कलामा सिक्ने चेष्टा जति थियो अहिले पनि त्यसको मात्रामा कमी छैन, उस्तै छ । पहिलो दिन अभिनय गर्न जाने दिन जुन चेष्टा, जुन निष्ठा जुन उत्साहमा जान्थेँ अहिले पनि त्यसैगरी अभिनयमा जान्छु । निश्चय नै अभिनय कलामा ज्ञान चाहीं यो पचास बर्षको अवधीमा बटुलेको छु ।
० अभिनयमा तपाइँको कोही गुरु छ ?
चलचित्र क्षेत्रको गुरु नै स्वर्गीय हिरा सिंह हुनुहुन्छ । उहाँले खेलेका चलचित्र अभिनेताका रुपमा जेजति खेल्नु भयो ती सबै उत्कृष्ट थिए । उहाँले निभाएका चरित्र जिवन्त थिए ।
० आफ्नो जीवनको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष के हो भन्ने लाग्छ ?
आफंैलाई हेरेर म भन्न सक्छुः जीवनमा म सन्तुष्ट छु । म एक्लै बसेर गीत लेख्छु यो कुनै बजारमा जाओस श्रोता पाओस् भनेर होइन । सन्तुष्टिको लागि मात्र । १२ बजे राती उठेर पनि कहिलेकाहीं गीत लेख्न बस्छु र सोचेभन्दा धेरै लेख्छु । त्यो कसैले देखेको सुनेको हुन्न, तर जति पटक हेरे पनि खुसी लाग्छ । मन फुरुङ्ग हुन्छ । यही कुरा हो मेरो सुन्दर पक्ष ।
० आजसम्म कसैबाट हेपिएको महसुस गर्नुभएको छ ?
खपेको छु त्यस्तो पनि, कति पटक कति पटक । बिनाअर्थ दोष पाइन्छ भने संबेदनशीलतामा चोट पु¥याइन्छ भने को दुख्दैन होला र ? एउटा मात्र घटना भएको भए सुनाइदिन्थेँ तर, त्यस्तो धेरै पटक भएको छ । तर त्यसलाई सामान्य बनाउँदै चल्ने हो । तपाइँकै जस्तो हुनलाई त सबै तपाइँ जस्तो हुनुप¥यो । सामान्य रुपमा एउटा मान्छेको बिचार, अनुहार अर्को मान्छेको अनुहार, विचारसँग मिल्दैन त्यस्तै एउटा मान्छेको अनुभव र बुझाई अर्को मान्छेसँग मिल्दैन । मलाई राम्रो लागेको कुरा उसलाई नराम्रो लागेको हुनसक्छ । त्यसैले दुबै तर्फबाट सोचेँ, आफ्नो तर्फबाट मात्रै सोचेर कहिल्यै बसिनँ ।
० जीवनको सबैभन्दा ठूलो खुसी के हो जुन तपाईले भोग्नुभयो ?
मलाई धेरै खुसी लागेको नेपालमा टेलिभिजन प्रसारण सुरु हुँदा हो । त्यसबेला म धेरै खुसी भएँ ।
उमेर बढ्दै गएपछि बिचारहरु फेरिंदै जान्छन्, तपाईका फेरिएका बिचार के के हुन् ?
सानो हुँदा कहिले चालीस पचास वर्षको हुँला र धेरै कुरा सिकौंला भन्ने मनले सोचिरहन्थ्यो । अहिले त्यसको ठ्याक्कै उल्टो छ । म त्यही सानो बेलामा फर्कन पाए कस्तो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
उमेरले नै विचार बोकेर हिडेको हुन्छ । हिजो जीवन कति ढिलो हिंडेको जस्तो लग्थ्यो । अहिले ओहो कति चाँडै गएछ भन्ने लाग्छ । अनुभव चाँही साथ हुन्छ तर पहिलेको अबस्थाको लोभ जागेर आउँछ यो बेला ।
० पछुतो लाग्ने केही काम गर्नुभएको छ जीवनमा ?
मैले जीवनको १० वर्ष ब्यापारमा हात हालेर गलत गरेँ । त्यो नगरेको भए केही गरिनँ भनेर मन असन्तुष्ट हुन्थ्यो । ब्यापारमा हात हालेर धेरै सिकेँ । म जे कुरालाई पनि पोजेटिभली हेर्ने गर्छु । त्यसैले त्यो ब्यापारले पनि मलाई सिकायो भन्छु ।
० दुःख चाही के रहेछ ?
म अत्यन्त कष्टपूर्ण अवस्थाबाट हुर्किएको मान्छे हुँ । सबैभन्दा दुःखको चित्र तपाँइको दिमागले के कोर्न सक्छ म त्यही अभाव र कष्टमा हुर्किएको मान्छे हुँ । पीडा, दुःख, अभाव केही कुराको कमी नभएको बिगतले मलाई हुर्कायो । मान्छेले थर देखेर मलाई अर्कै बुझ्छन् । तर मेरो बिगतले जति अभाव र त्यो छट्पटाई कमैले भोगेका होलान् भन्ने मलाई लाग्छ ।
जीवनमा जति दुःख देखेको छु त्यसको एक प्रतिशत पनि तपाइँले देख्नुभएको छैन । म जन्मदै कमै मान्छेले खेप्न नपर्ने परिस्थिति थियो । त्यही हाहाकार र असहज परिस्थितिले मलाई हुर्कायो । अनि तपाइँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ नीर शाह हाईफाई परिवारमा हुर्कियो भनेर ? मलाई लाग्छ मेरो बारेमा बाहिर गलत बुझाई छ ।
यसै कारण जीवनले मलाई रुन, हाँस्न, भाबुक हुन सबै सबै सिकायो । मैले जीवनका धेरै उतार चडावहरु देखेको छु । मान्छेले अभावलाई दुई किसिमले जोडेका हुन्छन् । एउटा चाहनाले सिर्जना गरेका अभाव र अत्यावश्यक आवश्कताले श्रृजना गरेको अभाव । जसमा न्युनतम आवश्यकताको समेत परिपूर्ति समेत गर्न नसक्ने खालको अभाव । तिनै न्युनतम आवश्यकता पनि परिपूर्ति नभएको अभावमा बितेको थियो मेरो बिगत । बरु जीवनमा सुखका अनुभुतिहरु छैनन् होला, दुःखका बारेमा ठेली ठेली काब्य तयार हुने अनुभव छन् मसँग ।